Eden Hazard Oo Saadaalyay Kulanka Adag Ee Paris Saint-Germain Vs Liverpool-Muxuu Ka Yidhi In Uu PSG U Ciyaari Doono? - Gool24.Net
Eden Hazard Oo Saadaalyay Kulanka Adag Ee Paris Saint-Germain Vs Liverpool-Muxuu Ka Yidhi In Uu PSG U Ciyaari Doono?
Xidiga xulka qaranka Belgium iyo kooxda Chelsea ee Eden Hazard ayaa waraysi uu bixiyay kaga hadlay kulanka xiisaha badan ee magaalada Paris ku dhex mari doona kooxaha Liverpool iyo Paris Saint-Germain wuxuuna sidoo kale Hazard ka hadlay in uu u ciyaari doono kooxda PSG oo waqti dheer lala xidhiidhinayay.
Eden Hazard ayaa sheegay in maalinta ay Paris Saint-Germain ku jirto waqtigeeda fiican in ay awood u leedahay in ay koox kasta oo kubbada cagta ah garaaci karto balse waxa uu tilmaamay in qaabka sahlan ee ay PSG uga ciyaarto horyaalka France uu keenay in ay ku dhibtoonayso Champions league.
Eden Hazard ayaa muujiyay in kooxda Paris Saint-Germain ay ka guulaysan doonto Liverpool laakiin waxa uu amaanay weerarka Liverpool ee Salah, Mane iyo Firmino oo uu koox fiican ku tilmaamay.
Dhinaca kale Eden Hazard ayaa meesha ka saaray wararkii la xidhiidhinayay Paris Saint-Germain wuxuuna tilmaamay in haddii ay dhacdo maalin uu ku soo laabto horyaalka France in markaas uu ka ciyaari doono kooxdii uu Chelsea uga soo wareegay ee Lille.
Kooxaha Paris Saint-Germain iyo Liverpool ayaa balansan November 28, iyada oo Group C uu galay xaalad adag maadaama oo ay Liverpool, PSG iyo Napoli si xoogan ugu dagaalamayaan. PSG ayaa kulankan soo dhawaynta doonta liverpool iyada oo guul 1-0 ah ka gaadhay Toulouse halka Liverpool ay 3-0 ku dubatay Watford.
Eden Hazard oo ka hadlaya PSG ayaa yidhi: “Heerka horyaalka Ligue 1, PSG waxay socotaa todobaad kasta, marka ay ka ciyaarayaan Champins League, waxay u maleeyaan in uu sahlanaan doono, laakiin way dhibtoodaan. Anigu ma jecli in aan go’aamiyo Ligue 1, laakiin taas ayaa run ah, marka aan PSG eego, waxay u muuqataa mid aad u sahlan”.
Eden Hazard oo sidoo kale Liverpool isla markaana saadaalinaya in PSG ay koox kasta oo ay Liverpool ku jirto garaaci karto ayaa yidhi: “Liverpool waa koox fiican oo haysata saddex gool dhaliye oo sare oo ah Salah, Firmino iyo Mane, laakiin PSG cid kasta ayay garaaci kartaa. Maalinta fiican, PSG cid asta ayay garaaci kartaa”.
Intaa kadib Eden Hazard ayaa la waydiiyay suurtogal nimada uu ugu soo biiri karo kooxda PSG oo horeba loola xidhiidhinayay wuxuuna yidhi: “Xidhiidh ayaan ka helay PSG, laakiin maan doonin. Waxaan markasta sheegaa in haddii aan ku soo laabto Ligue 1 in aan ay noqon doonto Lille”.
Dhinaca kale tababaraha kooxda PSG ee Thomas Tuchel ayaa rajo ka muujiyay in Neymar Jr iyo Kylian Mbappe ay ciyaari doonaan kulanka adag ee Liverpool wuxuuna yidhi: “Sidii shalay waan kaga niyadsamahay Neymar iyo Kulian, waxay isniinta awoodi doonaan in ay tababartaan”.